अन्तर्राष्ट्रिय खबर || Radio belauri
समाचार: अन्तर्राष्ट्रिय खबर
भारतमा भूकम्प जाँदा पश्चिम नेपालमा समेत त्यसको धक्का महसुस हरिश चन्द्र बाग, रेडियो बेलौरी, कञ्चनपुर, २५ माघ । भारतमा भूकम्प जाँदा पश्चिम नेपालमा समेत त्यसको धक्का महसुस भएको छ । हिजो राति करिब १०ः५० बजे भूकम्पको धक्का नेपालको सुदूरपश्चिममा समेत महसुस भएको हो ।
कञ्चनपुर लगायत अरु जिल्लामा भूकम्पको सामान्य धक्का महसुस भएपनि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा कडा धक्का महसुस गरिएको आजदेखि नयाँ वर्ष सन् २०१७ को सुरुवात, आजै नेपाली टोपी दिवस मनाइदैँ रेडियो बेलौरी, कञ्चनपुर, १७ पौष । आजदेखि नयाँ वर्ष सन् २०१७ को सुरुवात भएको छ । नयाँ वर्षको अवसरका विश्वभर मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम भइरहेका छन् । सन् २०१६ लाई बिदाई गर्दै एक आपसमा शुभकामना दिँदै नयाँ वर्ष मनाईंदैछ । आजै अन्तर्रा्ष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस “हाम्रो शान, हाम्रो पहिचान : नेपाली टोपी अभियान” भन्ने नाराका साथ मनाईंदै जापानमा बेलौरी युवा मन्च गठन जापान, ३० भदौ । कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाबाट व्यवसाय, काम र अध्ययनको सिलसिलामा जापान पुगेका बेलौरीवासीहरु एकजुट भएर बेलौरि युवा मन्च गठन गरेका छन् । जापानको टोकियोमा भएको बेलौरीका युवाहरुको विशेष भेलाले प्रेम प्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा युवा मन्च गठन गरेको हो । मन्चको उपाध्यक्षमा अर्जुन पाण्डेय र शंकर ढकाल, महासचिवमा सुशील सापकोटा, सचिवमा गोकुल खरेल, तमिलनाडुमा बाढी : ५६ जनाको मृत्यु भारत, मंसिर १६ । भारतको तमिलनाडुमा वर्षासँगै आएको बाढीका कारण ५६ जनाको ज्यान गएको छ । चेन्नईमा मात्रै १६ जनाको ज्यान गएको अधिकारीले बताएका छन् । लगातार परेको ठूलो पानीका कारण आएको बाढीका कारण समस्यामा परेका मानिसको उद्दारका लागि चेन्नईमा सेना, नौसेना तथा राष्ट्रिय आपद बलको टिम परिचलान गरिएको छ ।
बाढीका कारण चेन्नईको जनजीवन प्रभावित भुवन केसीका बाबुछोरा पुगे दुवई मान बहादुर के.सी.,यूएई, मंसिर ३ । राष्ट्रिय कलाकार युएई आउने क्रम दिन प्रतिदिन बढि रहेका बेला २० नोवेम्बर २०१५ शुक्रबारका दिन बरदुबईको इम्पेरिअल सुइट्स होटेलमा नेपाली कलाकार समुह (NAG) यूएईको दुबई क्षेत्रीय समितिले आयोजना गरेको ‘कलाकार परिचयात्मक तथा साँस्कृतिक’ कार्यक्रमका लागि नायक भुवन के.सी. र युवानायक अनमोल के.सी. आज युएईमा आई पुगेका छन् ।
नेपाली कलाकार जापानमा ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प कात्तिक २८ – जापानमा ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । नेपाली समय अनुसार शुक्रबार राति दुई बजेर ३६ मिनेट जाँदा जापनको दक्षिण पश्चिमी तटलाई केन्द्र बनाएर सात रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको युएस जिओलोजिकल सर्भेले जनाएको छ ।
भूकम्पका कारण ठूलो सुनामी आउने खतरा नरहेको प्यासिफिक सुनामी सेन्टरले जनाएको छ । भूकम्पपछि दक्षिण पश्चिमी तटमा सानो पेरिसमा आतंकवादी आक्रमण: १५८ को मृत्यु काठमाडौं, २८ कात्तिक । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सिलसिलाबद्ध आतंकवादी हमलामा १५८ जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानी पेरिसमा भएको अन्धाधुन्ध गोलाबारी र विस्फोटमा परी अहिलेसम्म १५८ जनाको मृत्यु भएको समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् ।
पेरिसका विभिन्न ठाउँमा एक-साथ गरिएको हमलाको जिम्मेवारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएसले लिएको छ । सो आक्रमण पेरिसको स्थानीय समयानुसार रातको ९ बजे भएको डुंगा दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु कात्तिक २६ – टर्कीमा आप्रवासी चढेको डुंगा दुर्घटना हुँदा कम्तिमा १४ जनाको ज्यान गएको छ । समुद्रको बाटो हुँदै युरोप प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासी चढेको डुंगा टर्की र ग्रिक आइल्याण्ड अफ लिसबोसको बिचभागको समुद्रमा डुबेको हो ।
ज्यान जाने १४ जना मध्ये सात जना बालबालिका छन् । २७ जनाको भने जीवितै उद्दार गरिएको छ । युरोपमा दम्पतीले अब दोस्रो सन्तान जन्माउन पाउने चीन, कार्तिक १२ । चीनले एक जनाभन्दा धैरै बच्चा जन्माउन नपाउने गरी लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । जनसंख्या नियन्त्रणका लागि सन् १९७९ देखि लागु गरेको नियम हटाएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले निकालेको विज्ञप्तीमा इच्छा भएका दम्पतिले अब दोस्रो सन्तान जन्माउन पाउने उल्लेख छ । सन् १९७९ मा लगाइएको कानुनी प्रतिबन्ध सैन्य कार्वाहीमा ६७ जनाको मृत्यु काबुल अफगानिस्तान, असोज २– अफगानी सेनाले शुक्रबार र शनिबार गरेको कार्वाहीमा ६७ जना बिद्रोहीको मृत्यु भएको अफगानी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा बल ९एएनएसएफ० ले कुन्दुज, बादखशान, वाल्ख, उरुज्गान, लोगार, घाज्नी, पक्तिका लगाएतका इलाकामा गरेको कार्वाहीमा ६७ लडाकूको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै कार्वाहीका क्रममा १३५ जना घाइते भएको उक्त मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा अभिलेखालय